स्टक डिलरको आज यी कम्पनीमा प्रवेश, कतिको गर्यो शेयर कारोबार ? – Palika Express
स्टक डिलरको आज यी कम्पनीमा प्रवेश, कतिको गर्यो शेयर कारोबार ?
PalikaExpress १७ चैत्र २०७७, मंगलवार 624 पटक हेरिएको
स्टक डिलरले सञ्चालन अनुमति पाएसंगै अब बजार कति अंकले बढ्ला ? कति बढाउला भन्ने खुबै चर्चापरिचर्चा हुन थालेको थियो । आज देखि भने उक्त कम्पनीले औपचारिक रुपमा शेयर खरिद बिक्रि गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा मंगलबार ५०१ ब्रोकर नम्बरबाट नागरिक स्टक डिलरले धितोपत्र कारोबार सुरु गरेको हो। नागरिक स्टक डिलरका अनुसार करिब ३.५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने गरी कारोबार सुरु गरिएको जनाएको छ। चिया गफदेखि तारे होटलसम्म कपाल काट्ने सैलुनदेखि टोलटोल बस्ति बस्तिसम्म स्टक डिलरले पायो सञ्चालन अनुमति, सर्वसाधारणलाई पनि शेयर !
बजार अब चुचुरो तर्फ भन्ने सबैलाई लाग्न सक्छ। भन्ने गफ हुने गर्थ्यो। यस दिन नागरिक स्टक डिलरले कुल ९ हजार कित्ता सेयर १ करोड २८ लाख ४३ हजार ५२० रुपैयाँबराबरको बिक्री गरेको छ भने ४७१ कित्ता सेयर ४ लाख २३ हजार ९०० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ। खरिद गरिएका कम्पनीमा आर एस डि सी लघुवित्त त्यस्तै बिक्रि गरेको कम्पनीमा नबिल बैंक इत्यादी रहेको देख्न सकिन्छ।
आजको बजारको आवस्यकता यहि थियो र लगानी कर्ताले सोचेको खोजेको अन्तर्मनको माग पनि पुरा भएको छ। बजारमा अप्रत्यासि कारोबारलाई पक्कै पनि रोक्ने छ। धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने र बजारको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खोलिएको नागरिक लगानी कोषको सहायक कम्पनी नागरिक स्टक डिलर कम्पनीले धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्न अनुमति पाएको हो।